Khadka Tooska ah ee Dhacdada ICE - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Khadka Tooska ah ee Dhacdada ICE
Khadka Tooska ah ee Dhacdada ICE
DIIWAANGELINTA WAXQABADKA JIISKA - WAC HOTLINE DHACDOOYINKA KOOXDA CIRC EE SI AY UGU SOO BAXDO DHAQANKA ICE EE DHAQANKA AH 844-864-8341
Haddii aad markhaati ka tahay waxqabadka ICE ama ICE ay albaabkaaga yimaadaan, fadlan wac Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah ee Colorado. Waxaa laga heli karaa 24/7 at (844) 864-8341 inaad ka jawaabto wixii su'aalo ama walaac ah ee aad qabtid; Xaqiijiyayaashu waxay ku hadlaan Isbaanishka iyo Ingiriiska.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijiyay in Immigration and Customs Enforcement (ICE) ay qaadi doonaan duullaanno bilaaban doona Axada July 17-keeda. Iyadoo taas laga duulayo, waxaan ka codsaneynaa dhammaan xubnaheenna inay wax akhriyaan oo ay wadaagaan macluumaadkan, waxaa laga heli karaa xaashiyaha ku yaal gudaha Ingiriisiga iyo Isbaanishka; markii dhammaanteen nala wargeliyo, waxaan is taageeri karnaa nafteenna iyo midkeenba midka kale iyadoo ICE ay dooneyso inay kala qaybiso beelaheena.
Warqad xaashi ah oo ku saabsan waxa la sameeyo haddii ICE yimaado albaabkaaga ayaa la heli karaa halkan. Macluumaad ku saabsan sameynta qorshaha u diyaargarowga qoyska ayaa la heli karaa halkan.
SI LOOGU SOO BARBAARIYO HAWLAHA JAWAABTA AMA BOLIISKA / ISKU-SHAQAYNTA ICE, FADLAN WAC HALKAN 844-864-8341. Fariin uga tag magacaaga, magaalada / magaalada aad ku nooshahay, lambarka taleefanka, iyo sheekada oo kooban. Qof baa kula soo xiriiri doona 5 maalmood oo shaqo gudahood. ANIGU QAARNA MA AHAN OO AANAN SOO BIXI KARIN TALO SHARCI AH.
TU VOZ ES EL PODER, COLORADO TE ESCUCHA (Codkaaga waa Awood, Colorado waa Dhageysi) waa mashruuc lagu aruurinayo sheekooyinka ku saabsan iskaashigii ugu dambeeyay ee booliska / ICE iyo howlaha ICE si loola socdo waxa ICE ay sameyneyso, eeg sida siyaasadaha cusub ay u saameynayaan bulshada. & kalsoonida ay ku qabaan booliska, iyo uruurinta cadeymo lagu taageerayo isbedelada siyaasadeed ee muddada fog ee sii xadidaya wada shaqeynta ka dhaxeysa sharci fulinta deegaanka iyo ICE.
Khadka tooska ah ee dhacdada ICE ee CIRC - 844-864-8341 - waxaa isku dubariday shabakad gobolka oo dhan oo mutadawiciin ah oo loo tababaray inay diiwaangeliyaan markhaatiyada la xiriira isdhexgalka booliska iyo baraha bulshada iyo inay ka taageeraan shakhsiyaadka inay maraan oo ay la dagaallamaan kiisaskooda masaafurinta. Haddii aad jeclaan lahayd inaad noqoto dukumeenti, fadlan la xiriir Sophia Clark sophia@coloradoimmigrant.org.